बलात्कारले लोकतन्त्र बदनाम
अधिवक्ता गंगा दहाल –
महिला हिंसा झन भन्दा झन बढ्दै गैरहेको अवस्था टट्कारो देखिन्छ । समाजमा महिलाको प्रतिनिधित्व जहाँ जहाँ जति जति सवल र सुदृढ बन्दै गएको, कानुनले महिला र पुरूषको समानता समान सहभागीताको कुरा गरेता पनि हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू रोकिएनन् । दिनानुदिन झन भन्दा झन बढिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा हत्याहिंसा र बलात्कार बढ्दै जानु अत्यन्त दुःखलाग्दो स्थिति हो ।
घर बाहिर हिडेका छोरी चेली अलि ढिलो घर फर्किए भने डराउनु पर्ने परिस्थितिको सृजना भएको छ । एउटा घटना घटिसकेपछि अर्को सोही प्रकृतिका घटना बारम्बार घटिरहेको देखिन्छ । यसरी सोही घटना दोहोरिनु घटिरहनुको मतलब कानुन कमजोर भएरै हो कि कानुनलाई बेवास्ता गरेर हो ? कि कानुनको पालना गराउन नसकेर हो ? समाजशास्त्री र सरकार मानवाधिकारको सुरक्षाका लागि सचेत नभएर हो ? बुझ्न सकिएन । निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याको मात्र ३ महिनाको अवधिमा दैनिक सरदर ६ जना भन्दा बढीको बलात्कार भइरहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षका अन्य तथ्यांक हेर्दा २०७१ साल देखि २०७२ साल सम्ममा ९८१ जना बलात्कारको सिकार भएका छन् भने २०७२ देखि २०७३ सालमा एक हजार ९३ जना बलात्कारको सिकार भएछन् । त्यस्तै गरेर २०७३ साल देखी २०७४ सम्ममा एक हजार एक सय ३७ जना बलात्कृत भए । त्यस्तै गरेर २०७४ देखी २०७५ सालमा एक हजार चार सय ८० जनाको बलात्कार भयो । २०७५ देखी २०७६ सालमा दुई हजार दुई सय ३३ जनाको बलात्कार भएको रेकर्ड देखाउँछ प्रहरी । प्रहरी रिपोर्ट अनुसार नै २०७६ देखी २०७७ सम्ममा दुई हजार एक सय जना हिंसामा परेका छन् । हत्या हिंसा र बलात्कार महारोग नै भएको छ । यो कहालीलाग्दो प्रहरी तथ्यांक हो । यसबाहेक पनि दूरदराज र गाउँठाउँमा यस्ता बलात्कार र हिंसाका घटना दिनदिनै घटिरहेका छन् । तर सार्वजनिक हुन्न । कतिपय घटनाहरू ठालुहरू मिलेर मिलापत्र गराउने गर्छन् । यस्ता जघन्य अपराधहरू लेनदेनमा मिलापत्र गराउने र इज्जत जोगाउने कार्य पनि भइरहेका हुन्छन् ।
समाजमा बलात्कार मात्र होइन, हत्या त्यस्तै बढ्दो छ । यहीँ रेसियोमा हत्या हिंसा बलात्कारका घट्ना घट्दै र बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा भयावह परिस्थितिको सृजना हुँदैन भन्न सकिन्न । हाम्रा छोरी चेली कति जोखिममा छन्, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी एक पछि अर्को बलात्कार पछिका हत्या पटक पटक दोहोरिरहका छन् । त्यहीँ प्रकृतिको त्यस्तै स्वरूपमा अर्को घटना घट्नुले अपराध कर्मीहरूको मनोवल बढ्दै गएको भान हुन्छ । सिको गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ त्यस्ता मनोवृत्तिले । अझ हाड नाता भित्रको बलात्कारका घटना हिंसा दुव्र्यवहार सुनेर छक्क पर्नुछ । आधुनिकताका नाममा असभ्य र समाजविरोधी क्रियाकलाप ह्वात्तै बढेको छ । यस्ता घटना पछिल्लो समयमा सुन्नमा आएका छन् । अपराध गर्ने ब्यक्ति कानुनसँग पटक्कै नडराएको परिस्थिति हो यो । बलात्कार पनि बालिकादेखि बृद्ध महिलासम्मको भयरहेको छ ।
सुरक्षा निकाय र कानुनले काम नगर्दा अपराध बढेका हुन् । प्रहरी पनि लेनदेनमा बढी ध्यान दिएर अपराध अनुसन्धानमा कमजोर बन्दै गएको छ । कानुनी शासन स्थापना गर्न नसके हुने यस्तै अराजकता हो । अराजकतालाई न्यूनिकरण गर्न अपराधिकरणमा राजनीतिक संरक्षण दिने क्रम रोक्नैपर्छ । जनप्रतिनिधि, अदालत, प्रहरी, सरकारी निकायका साथै घट्ना नियन्त्रण गर्न घर–परिवार भित्र र नागरिक समाज लगायत आमनागरिकले समेत कडाइसाथ लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा नेपालको लोकतन्त्र लोकका लागि जंगली सभ्यतातिर उन्मुख हुने पक्का छ ।